के प्रदिप र जसिताको ‘प्रेमकहानी’ कै कारण मिलन र प्रदिपबीच सम्बन्ध विग्रिएको हो ? के भन्छन् मिलन ? (भिडियो) – An Online Entertainment News Portal
HomeEntertainmentके प्रदिप र जसिताको ‘प्रेमकहानी’ कै कारण मिलन र प्रदिपबीच सम्बन्ध विग्रिएको हो ? के भन्छन् मिलन ? (भिडियो)
के प्रदिप र जसिताको ‘प्रेमकहानी’ कै कारण मिलन र प्रदिपबीच सम्बन्ध विग्रिएको हो ? के भन्छन् मिलन ? (भिडियो)
June 3, 2018 sutraentertainment Entertainment, Event, Kollywood, News, Videos 0
मिलन चाम्स निर्देशित फिल्म ‘लिलिबिलि’ ले प्रदर्शनको ५१ औं दिन भव्य कार्यक्रमको आयोजना गरेर मनाएको छ । आइतवार राजधानीमा निर्माण टिम, फिल्ममा अभिनय गरेका कलाकार तथा सञ्चारकर्मीको माझ ५१ औं दिनको समारोहलाई केक काटेर मनाईएको हो । युवा स्टारर प्रदिप खड्का र जसिता गुरुङ सहभागी कार्यक्रममा पछिल्लो समय प्रदिप र जसिताको सम्बन्धका कारण निर्देशक चाम्स र प्रदिपको सम्बन्धबारे चिसिएको सम्बन्धको बारेमा पत्रकारले प्रश्न समेत उठाएका थिए ।
त्यति मात्रै होईन निर्माता गोविन्द शाही तथा निर्देशक चाम्सको चिसो सम्बन्धबारे पनि पत्रकारले प्रश्न उठाएका थिए । प्रदिप र जसिताको प्रेमकहानीले प्रदिप र मिलनको सम्बन्ध विग्रिएकै हो त ? के भन्छन् मिलन ? त्यस्तै, पछिल्लो समय मिलनले आफूले निर्देशन तथा निर्माण गर्न लागेको फिल्ममा प्रदिपलाई किन दोहोर्याएनन् त ?
निकै महँगो पारिश्रमिक लिएर ‘ब्याचलर बन्टी’ मा अनमोल अनुबन्धित
‘चि मुसी चि’को पोस्टर सार्वजनिक